Noocyo Cagaaran | December 2019
Karootada "Shantane 2461": sharaxaadda iyo beerashada
Karootada "Shantane 2461" ayaa muddo dheer ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee beeraha. Haysashada tayada hoggaamiye, noocyada noocaas ah waxay nuugeen dhammaan sifooyinka alaab la aqoonsan karo: dhadhan wanaagsan iyo caraf udgoon, muuqaal qurux badan, dhalid sare, kala duwanaansho isticmaalka. Qodobkani waxaan eegaynaa waxyaabaha gaarka ah ee daryeelka, sharraxaadda kala duwanaanta, faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka martida Faransiiska.
Carrot "Nantes" - oo ku dhowaad 80-jir ah oo wadaad ah, kaas oo isbeddelay boosaskii hore ee Midowga Soofiyeeti. Kala duwanaansho waxaa laga helay 40 jirkii qarnigii la soo dhaafay. Karootada Tani waxaa lagu beeray koonfurta of Krasnodar iyo sariiraha gobolka Irkutsk - iyo meel kasta oo ay ku faraxsan bannaanka u leh dhalid joogto ah.
Qodobo waxtar leh oo karootada casaan leh
Dareemaha midabka aan caadiga aheyn ayaa hadda la siiyaa caan. Aynu isku dayno inaan ogaano waxa, marka laga reebo midabka xididka, waxay ka duwan tahay noocyada caadiga ah ee dabacasaha, kuwaas oo leh faa'iidooyin iyo macquul ahaan guryaha aan fiicneyn. Sharaxaad Ka soo jeedda aragtida botaniska, dabacasaha mugdiga ah waxay ka tirsan yihiin noocyada hoose ee karootiga caadiga ah (suboc.
Vita Long kala duwan oo kala duwan oo karooto
Mid kastaa wuxuu dalbanayaa shuruudaha tayada iyo astaamaha khudradda: dhadhanka ayaa muhiim u ah qof, haynta tayada waa mid muhiim u ah qof, qaabeyn iyo midab hodan qof. Dhammaan arrimahan - shuruudaha aad ku safri karto adiga oo dooranaya darajo. Dhammaan noocyada dabacasaha waxaa ka mid ah siddeed nooc oo kala duwan: "Amsterdam", "Nantes", "Flaccus", "Shantenay", "Berlikum", "Mini-carrada", "karootiga Paris" iyo noocyada ku-meel-gaadhka ah ee karootada.
Maanta waxaan kuu soo bandhigi doonaa noocyo qurux badan oo dabacasaha loo yaqaan "Queen of Autumn". Waxaa jira noocyo badan oo leh tayo wanaagsan, laakiin "Queen of Autumn" ayaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee koraya jawi diiran iyo mid diirran. Waxaad baran doontaa sida si habboon loo beerayo inaad u baahan tahay dabacasaha koritaanka iyo horumarka wanaagsan, iyo weliba helitaanka sifooyin badan oo kala duwan.
Tawxiidka qoraaga ee Tushon
Karootada waa caan jecel, caan ah, iyo khudaar caafimaad leh. Maanta waxaa jira noocyo badan oo leh sifooyin kala duwan. Maqaalka waxaan ka hadli doonaa noocyada kala duwan ee Tushon, waxaan ku siin doonaa sharaxaadiisa, talooyin ku saabsan beeridda iyo daryeelka, sawir ka mid ah waxa koraya haddii dhammaan talooyinka la raaco. Sharax iyo sawir "Tushon" waa noocyo kala duwan oo karootada ah.
Waxyaabaha ugu caansan: Canadian F1 noocyo kala duwan ah
Karootada "Canada F1" ayaa durbadiiba laga helayaa suuqyo badan oo gaar ah, sababtoo ah, sida lagu qeexay, noocyada kala duwan ee dhadhanka fiican leh dhalidda iyo waxay ku habboon tahay jawiga iyo xaaladaha ciidda ee aagga dhexe. Iyo xataa bannaanka u leh waayo-aragnimo weyn ku heli karo karooto this ka mid ah wanaagsan ee beeritaanka kale ee beerahooda.